Xafiiska Broadband ee Gobolka Washington - Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Xafiiska Gobolka Broadband Broadband - Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo
Ereybixinta isgaarsiinta waxay noqon kartaa mid jahwareer leh, meel bannaan oo had iyo jeer isbeddela, way adkaan kartaa in lala socdo. Hoos waxaan ku qeexnay ereyada ugu badan ee la isticmaalo:
5G, ama jiilka shanaad, waa soo noqoshada soo socota ee shabakadaha taleefanka gacanta. Adeegga 5G wuu ka dhakhso badan yahay kana daahsan yahay 4G LTE, wuxuuna u baahan doonaa "unugyo yaryar" oo cufan la geeyo halkii laga isticmaali lahaa munaaradaha unugyada makro ee badanaa loo isticmaalo 4G. Sababtoo ah unugyo badan oo yar yar oo 5G ah waa in si wada jir ah loo hawlgeliyaa si loo abuuro shabakad, tikniyoolajiyadda ayaa ku habboon magaalooyinka waaweyn.
Hay'adaha bulshada ee calanka, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn dugsiyada, xarumaha daryeelka caafimaadka, iyo maktabadaha. Hay'adaha barroosinka mararka qaarkood waxay kuxiran yihiin fiber, xitaa marka adeegga fiber uusan ganacsi ahaan bulshada dhexdeeda kahelin. Sababtaas awgeed, waxay u dhaqmi karaan sidii isku xirnaanta laf-dhabarka internetka
Xidhiidhka internetka wuxuu leeyahay laba qaybood - xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta. Marka labada xawaare isku mid ahayn, isku xirnaanta waxaa loo yaqaan asymmetric.
Qayb ka mid ah shabakad ballaadhan oo marin-u-helka maxalliga ah ama barta adeegsigeedu dhammaado ku xidhan yahay shabakadda internetka ee ugu weyn.
Xaddiga ugu badan ee wareejinta xogta.
Waxoogaa yar ayaa ah unug aasaasi u ah macluumaadka xisaabinta iyo isgaarsiinta dhijitaalka ah.
Teknolojiyada bixisa adeegsiga internet xawaarihiisu sarreeyo iyo adeegyo kale oo isgaarsiineed oo casri ah oo loogu talagalay dadka isticmaala dhammaadka.
Barnaamijka Fursadaha Farsamada Broadband - fursadii hore ee maalgelinta oo qayb ka ahayd Xeerka Soo kabashada iyo Dib u Maalgelinta Mareykanka ee 2009.
Cutubka macluumaadka dhijitaalka ah ee inta badan ka kooban siddeed qaybood.
Nooc ka mid ah marin-u-helka Internet-ka oo loo adeegsado kaabayaal isku mid ah telefishanka fiilooyinka.
Xisaabinta daruuriga ayaa ah baahida loo qabo helitaanka ilaha nidaamka kombiyuutarka, gaar ahaan keydinta xogta iyo awoodda xisaabinta, iyada oo aan isticmaalehahu si toos ah u maamulin firfircoon. Ereyga guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo xarumaha xogta ee ay heli karaan isticmaaleyaal badan oo internetka ah.
Tuubo la xoojiyay oo ay kaabiga ku socoto. Marin-biyoodka ayaa ka ilaaliya fiilooyinka fiber-optic-ga dhulka ku jira waxaana lagu ridi karaa dhulka hoostiisa markii ay habboon tahay oo hadhowna “la afuufo” ama “la jiido” fiilada fiber-ka.
Urur aan macaash doon ahayn, xubin xubin ka ah oo bixiya adeeg loo baahan yahay. Xubnuhu waxay bixiyaan lacag yar si ay ugu biiraan una yeeshaan xuquuqda codbixinta ururka dhexdiisa.
Qalabka Dhismeyaasha Macaamiisha - sida caadiga ah wuxuu sharxayaa sanduuqa ku yaal dhinaca guriga aqbalkiisa oo u diraya calaamadda shabakadda, isku xirka macaamiisha.
Fiber mugdi ah
Kaabayaasha fiber-ka ee aan la isticmaalin ee aan "lagu shidan" adeegga internetka. Markuu qof dhisayo shabakad fibre ah, qiimaha ku darista fiber ka badan inta isla markaaba loo baahan yahay waa mid la iska indhatiri karo oo kharashka ku baxaya in lagu daro fiber ka dambeeya uu aad u sarreeyo. Sidaa darteed, mashaariic badan waxaa ka mid ah fiber-ka madow ee baahida mustaqbalka.
Koox aad u tiro badan oo ka mid ah server-yada kombiyuutarada isku xiran oo sida caadiga ah ay ururadu u adeegsadaan keydinta fog, ka shaqeynta, ama qeybinta xog fara badan.
Ku baahinta xogta aag ballaaran iyadoo loo marayo mowjadaha raadiyaha. Badiyaa waxay tixraacdaa macluumaad dheeri ah oo ay soo diraan telefishannada oo ay weheliyaan telefishanka dhulka ee dhijitaalka ah, laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa in lagu dabaqo calaamadaha dijitaalka ah ee TV-ga analogga ama raadiyaha.
Siyaasad lagu dhiirigelinayo meelaynta faybar ama marin biyoodka dhulka hoostiisa markasta oo la qodayo jeexdin loogu talagalay mashruuc dadweyne.
Xidhiidhka internetka ayaa leh laba qaybood - hoos u dhac iyo durdur. Downstream waxaa loola jeedaa heerka uu kombiyuutarka isticmaalaha ka heli karo xogta internetka. Micnaha: download
Khadadka macaamiisha dijitaalka ah (DSL; asal ahaan macaamiisha macaamiisha dijitaalka ah) waa qoys tiknoolajiyad ah oo loo isticmaalo in lagu gudbiyo xogta dijitaalka ah ee khadadka taleefanka.
Nidaam adeegsada muraayad (ama caag) si uu u qaado iftiinka si uu u gudbiyo macluumaadka. Caadi ahaan, dhinac kasta oo ka mid ah faybarku wuxuu ku dhegan yahay leysar soo dira calaamadaha iftiinka. Markuu isku xirku gaaro awoodda, leysarka waa la casriyeyn karaa si loo soo diro macluumaad badan oo dheeri ah oo ay la socdaan isla fiberka.
Habka isku xirnaanta ee adeegsada tikniyoolajiyadda wireless-ka ee taagan si ay u jarto "meylkii ugu dambeeyay" inta udhaxeysa laf-dhabarta internetka iyo rukunka.
Fibre-ilaa-guriga. Maaddaama inta badan shabakadaha isgaarsiintu ay adeegsadaan fiber qayb ka mid ah, FTTH waxay caddeysaa kuwa isticmaala fiber si ay ugu xirmaan macmiilka.
Fiber-to-the-Premise ama Fibre-to-the-User ayaa loo adeegsadaa xoogaa isweydaarsi ah FTTH si loogu sharaxo shabakadaha fiber-ka buuxa.
Gigabits halkii ilbiriqsi (Gbps) waa xawaare wareejin xog ah oo u dhiganta 1,000 megabits halkii ilbiriqsi (Mbps). Si wada jir ah ayaa loogu magacaabay "Gig".
Gaaban ee Shabakadda Hay'adeed. Kani waa shabakad ay dowladda hoose ka rabto inay ku fuliso waajibaadkeeda. I-Net wuxuu had iyo jeer si gaar ah u tilmaamaa shabakad loo dhisay adeegsiga magaalada (isku xirka iskuulada, tusaale ahaan) shirkadda fiilada iyadoo qayb ka ah heshiiska xuquuqaha lala galayo magaalada. Micnaha: Shabakad Hay'ad
Adeegsiga kombiyuutarada si loo kaydiyo, loo soo helo, loo gudbiyo, loona maamulo xogta ama macluumaadka.
Wadooyinka xogta aasaasiga ah ee udhaxeeya shabakadaha kumbuyuutarka ee waaweyn, istiraatiijiyad isku xiran iyo router-yada asaasiga ah ee internetka.
Internetka Waxyaabaha (IoT)
Nidaam ka mid ah aaladaha xisaabinta ee isku xiran, mashiinada farsamada iyo mishiinka dhijitaalka ah oo awood u leh inay ku wareejiyaan xogta shabakad iyada oo aan la is dhexgal bani-aadmin ama aadanaha-to-kombuyuutar.
Kilobits ilbidhiqsi waa xawaare wareejin xog ah oo u dhiganta 1,000 gabal ilbiriqsi.
Lugta ugu dambeysa ee xiriirka ka dhexeeya adeeg bixiyaha iyo macaamilka. Micnaha: meylka koowaad
Qiyaasta dib u dhaca waqtiga ee loo baahan yahay si macluumaadka loogu maro shabakada oo dhan.
Khadadka Aragga (LOS)
Waxaa loola jeedaa tikniyoolajiyadaha geyn kara calaamadda kaliya meelaha ay 'arki karto'. Tusaale ahaan wuxuu noqon doonaa isgaarsiinta gacanta ee 5G ee soo socota, calaamadaha aan geli karin meelaha badankood.
Kaabayaasha Fibre ee loo adeegsado in lagu bixiyo adeegga internetka
Unug loo adeegsado in lagu bixiyo daboolida shabakada gacanta aag aad u weyn (marka loo eego unugyada yar yar, ee daboolaya aag yar). Badanaa waxaa lagu dhejiyaa munaaradaha.
Megabits halkii ilbiriqsi waa xawaare wareejin xog ah oo u dhiganta 1,000,000 oo jajab ilbiriqsi sidoo kale wuxuu lamid yahay 1,000 kiilomitir ilbiriqsi.
Qeybo badan oo hoy ah - badanaa guryaha dabaqyada ah.
Middle mile waa eray inta badan loola jeedo isku xirka shabakada udhaxeysa maylkii ugu dambeeyay iyo Internetka weyn. Tusaale ahaan, dhulka miyiga ah, maylka dhexe wuxuu u eg yahay inuu isku xirayo shabakada magaalada iyo magaalo weyn oo balaaran halkaasoo ay kuwada xiriiraan shirkadaha waaweyn.
Shabakadda dowladda hoose
Shabakad internet oo ballaadhan oo ay leedahay dowlad hoose.
Khadka Tooska ah ee Aragga (NLOS)
Idaacadaha laga sii gudbiyo waddo qayb ahaan xaniban
Maamulka Isgaarsiinta iyo Warfaafinta - waa qeyb ka tirsan Waaxda Ganacsiga Mareykanka.
Nidaam ay shabakaddu u furan tahay bixiyeyaasha adeegga madaxbannaan si ay u bixiyaan adeegyo. Xaalado badan, milkiilaha shabakada wuxuu kaliya ka iibiyaa helitaanka jumlada ah bixiyeyaasha adeegga ee bixiya dhammaan adeegyada tafaariiqda (tusaale: ciyaarta seddexaad ee internetka, taleefanka, tv).
In la abuuro shabakad la gasho tartan bixiyaha xilka haya.
Deganaanshaha ama ganacsiyada galaangalka shabakadda. Maaddaama shabakad FTTH la dhisay, guud ahaan waxaa lagu dhisi doonaa xaafad ka hor inta aan guryaha ama ganacsiyada shaqsiyadeed lagu xirin fiilooyin dhibic ah (oo sidoo kale ah fiilo-fiber-optic). Marka guri ama meherad “la mariyo,” waxay ka dhigan tahay inay xaq u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan adeegyada (taas oo weli u baahan karta farsamo yaqaan inuu xiro fiilada dhibcaha).
Kani waa nooc ka mid ah shabakadaha u oggolaanaya kombuyuutarrada inay si toos ah isugu xirmaan halkii ay iyaga ka abaabuli lahaayeen iyagoo adeegsanaya isku xirnaanta kala sareynta. Ereygan waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu sharaxo nooc ka mid ah faylasha la wadaagayo oo si weyn u kordhisay isticmaalka baaxadda iyo u oggolaanaya deg deg deg deg ah isla fayl isku mid ah kombiyuutarro badan. Erayo la mid ah: p2p
Barta Joogitaanka waa goob marin laga helo oo bixisa isku xirnaanta hal meel illaa internetka intiisa kale. ISPs waxay leeyihiin PoP badan oo ka mid ah shabakadahooda.
Adeegga Adeegyada Reer Miyiga - Waa waaxda Beeraha Mareykanka.
Helitaanka Internetka Satelite-ka
Helitaanka internetka ee loo maro dayax gacmeedyada.
Koox dayax-gacmeedyo macmal ah oo si wada jir ah uga wada shaqeeya nidaam ahaan si ay u bixiso caymis joogto ah oo caalami ah ama mid adduunka u dhow.
Unugyada yar-yar waxay bixiyaan adeeg wireless ah iyagoo ku xiraya shabakadaha fiber optic. Unugyadan aad ayey uga yaryihiin una dhow yihiin isticmaalaha - oo badanaa ku dhegsan tiirarka taleefannada iyo tiirarka nalka - marka loo eego unugyada makro ("munaaradaha unugyada"). Unugyo yaryar ayaa horay uga jiray magaalooyin badan si ay u bixiyaan adeegga 4G.
Guud ahaan waxaa loo adeegsaday in lagu sharaxo beel adeegsata teknoolojiyada IoT iyo xogta.
Xidhiidhka internetka wuxuu leeyahay laba qaybood - xawaare soo dejin iyo soo dejin. Marka labada xawaare isku mid yihiin, isku xirka waxaa lagu magacaabaa isku mid.
Tirada macaamiisha adeegga - sida caadiga ah lagu muujiyey boqolleyda kuwa qaadanaya adeegga oo loo qeybiyay tirada guud ee dadka qaadan kara adeegga. Haddii shabakad fidisa bulshada ay dhaafto 10,000 oo qof oo 6,000 oo qofna ay iska diiwaangeliyaan, waxay leedahay qiyaas qaadasho ah 60%. Markii la qorsheynayo shabakadda, waxaa loo dhisi doonaa inay noqoto mid faa'iido leh ama ka sarreysa qaddar qaadasho cayiman sida lagu qeexay qorshaha ganacsiga. Guud ahaan, shabakaduhu waxay u baahan yihiin dhowr sano si ay u gaaraan qiimaha qaadashada sababtoo ah waqtiga dheer ee ay ku qaadato isku xirka macaamiil kasta.
Shirkad taleefan - waa shirkad bixisa adeegyada isgaarsiinta sida codka (taleefanka) iyo adeegyada xogta. Sidoo kale loo yaqaan sidayaal caam ah ama LECs (Isweydaarsiyaasha Maxalliga ah ee Deegaanka); ILECs waa bixiyeyaal xil haya, sida AT&T ama Verizon.
Isku dhaafsiga macluumaadka noocyada kala duwan ee teknoolojiyada ee ku saabsan siligga, raadiyaha, qalabka indhaha ama nidaamyada kale ee elektromagnetic
Dadaallada daryeelka caafimaadka ee ay taageerayaan isku-xirka qadka weyn. Codsiyada Telehealth waxay si gaar ah ugu tiirsan yihiin awoodda sare, adeegga daahitaanka yar. Yoolalka waxaa ka mid ah awooda in daryeel caafimaad oo tayo leh loo keeno kuwa ka fog cosbitaalada ama bukaanada waayeelka ah ee doonaya inay meesha ku gaboobaan.
Saddexda adeeg ee ugu waaweyn ee laga bixiyo shabakadahaas - telefishanka, adeegyada taleefannada, iyo marin u helka internetka.
Xidhiidhka internetka ayaa leh laba qaybood - biyo mareen iyo hoos. Sare u kaca waxaa loola jeedaa xaddiga uu koombiyuutarka isticmaaluhu xogta ugu diri karo internetka. Erayo la macno ah: upload
Sanduuqa Adeegga Universal - oo ah barnaamij federaal ah oo leh afar barnaamij: kharash aad u sarreeya (oo lagu kabo kharashka badan ee adeegyada ee meelaha baadiyaha ah), dakhligoodu hooseeyo (oo ay ku jiraan qiimo dhimista Lifeline iyo Link Up ee kuwa saboolnimada ku jira), daryeelka caafimaadka ee miyiga (qiimaha hoos loogu dhigay daryeelka caafimaadka miyiga bixiyeyaasha si loo hubiyo inay helaan adeegyo lamid ah kuwa dhiggooda ah magaalooyinka), iyo iskuulada iyo maktabadaha (E-Rate waxay kabtaa adeegyada isgaarsiinta ee dugsiyada iyo maktabadaha).
White Space Internetka
Wuxuu adeegsadaa qayb ka mid ah raadiyaha muuqaalka ee loo yaqaan 'White \_' meelaha (raadiyaha). Heerkan soo noqnoqda waxaa la sameeyaa marka ay jiraan duleello u dhexeeya kanaallada telefishanka. Meelahan waxay ku siin karaan marin ballaadhan oo internet oo la mid ah kan moobiilka 4G.
Kani waa qayb ka mid ah borotokoolka u oggolaanaya aaladaha wireless-ka inay is weydaarsadaan macluumaadka iyagoo adeegsanaya mowjadaha aan ruqsadda haysan. Qalabka wata sumadda Wi-Fi waa la wada shaqeyn karaa.
Barta Gaaritaanka Wireless-ka
Xidhiidhinta kombiyuutarka, barta marin-u-helidda bilaa-waayirka ah (WAP), ama in ka badan guud ahaan marin-u-helidda (AP), waa aaladda qalabka isku-xirnaanta ee u oggolaanaya aaladaha kale ee Wi-Fi inay ku xirmaan shabakad fiilooyin leh. AP badanaa waxay ku xirmaan router (iyada oo loo marayo shabakad fiilooyin ah) iyada oo ah qalab kalidii ah, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa qayb muhiim u ah router laftiisa. AP waxaa lagu kala geddisan yahay aag kulkulul oo ah goob muuqaal ah oo laga heli karo marin Wi-Fi ah.
Xadhig Xarig la ’
Tiknoolajiyada isgaarsiinta ee bixisa adeegsiga internetka xawaaraha sare leh ee wireless-ka ah ama helitaanka isku xirka kombiyuutarka ee ku baahsan aag ballaaran. Ereygu wuxuu ka kooban yahay qaddar go'an iyo mid isweydaarsi ah.
Guddiga Howlaha Guud - Daraasad Qiimeyn Qorsheynta Xadka Broadband oo dhan ah
Xirmada Broadband Community (web) (PDF)